Kooxo Cunsuriyiin ah oo Weerar ku Qaaday Markaz Jaaliyadda Muslimiinta Sweden ay ku leeyihiin magaalada Gothenburg.
Wednesday February 22, 2017 - 19:18:29 in Wararka by Super Admin
Wararka ka imaanaya wadanka Sweden oo kamid ah wadamada qaaradad Yurub ayaa sheegaya in kooxo hubeysan ay weerar ku qaadeen xarun ay leeyihiin jaaliyadda muslimiinta laga tirada badanyahay.
Sawir markazka muslimiinta Seweden ee la weeraray
Kooxo Nasaaro xagjirayaal ah ayaa weeraray markazka thaqaafada muslimiinta ee kuyaal magaalada Gothenburg oo dhacda galbeedka wadankaasi.
Sida ay sheegeen saraakiisha Booliska waxaa gubtay markazka muslimiinta balse majirin wax khasaara ah oo gaaray dadkii ku dhax sugnaa.
Maamulayaasha dowladda Sweden ayaa xaqiijiyay in kooxo aan la garan ay rasaas huwiyeen xarunta thaqaafada muslimiinta Gothenburg kadibna ay isaga baxsadeen goobta.
Kooxaha dab damiska ayaa sheegay in ay damiyeen dabka ka kacay xarunta balse waxaa jira khaasara maaliyadeed oo gaaray dhismaha muslimiinta ee la weeraray.
Kooxo cunsuriyiin islaam naceybka ku fogaaday ayaa la rumeysanyahay in ay mas’uul ka yihiin weerarkan iyo kuwa kale oo horay uga dhacday Sweden.
Haaruun Awzeel oo madax ka ah Urur ay leeyihiin dadka Turkida Sweden ayaa warbaahinta u sheegay in goor sii horraysay ay qalabka muhiimka ah ka daad gureeyeen xaruntooda Gothenburg ee la weeraray kadib markii ay heleen dhambaallo digniino ah oo ka imaanaya jihooyin xagjirayaal Nasaara ah wuxuuna carrabka ku adkeeyay in aysan jirin qof wax ku noqotay weerarkii ugu dambeeyay ee lagu qaado mid kamida xarumahooda.
Sanaddii 2015 wadanka Seweden waxaa ka dhacay 369 falal dambiyeedyo ka dhan ah muslimiinta, 247 kamid ah waxay ahaayeen hanjabaadyo loo diray dadka muslimiinta ah halka 76 kamida ay ahaayeen falal kharbudaad ah oo lagula kacay xarumo muslimiintu leeyihiin iyo hanti la baabi’iyay.
Sida ay faafisay mu’asaso ka faalloota naceybka ka dhanka ah muslimiinta qaaradda Yurub dalka Sweden wuxuu safka hore uga jiraa meelaha lagu dhibaateeyo muslimiinta,46 xaaladood oo xagudub jireed ah ayay muslimiinta Seweden la kulmeen sanaddii 2015.
Wadamo ay kamid yihiin Faransiiska, Holland iyo Talyaaniga ayaa caan ku ahaa naceybka ka dhanka ah dadka muslimiinta waxaana muuqata in wadamo hor leh oo qaaradda Yurub katirsan ay kusii kordhayaan falalka cunsuriyadeed ee islaam naceynka ku dhisan.
Dad badan ayaa aaminsan in guushii Donald Trump ka gaaray doorashooyinkii Mareykanka ay dhiiri gelin siisay xisbiyada midigta fog ee xagjirayaasha Nasaarada waxaana laga yaabaa in doorashooyinka soo socda ay kusoo baxaan siyaasiyiin caan ku ah islaam naceynka oo kajira wadamada Boollan, Faransiiska, Holland iyo Denmark.